DEG DEG:Dagaal sababay dhimasho & dhaawac oo ka dhex qarxay shacabka magaalada Laascaanood iyo Ciidamada Somaliland…. | Puntland
DEG DEG:Dagaal sababay dhimasho & dhaawac oo ka dhex qarxay shacabka magaalada Laascaanood iyo Ciidamada Somaliland….
Wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in haatan rasaas xoogan laga maqlayo gudaha magaaladaasi taas oo u dhaxaysa ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland iyo dad shacab ah.
Rasaastani ayaa timid sida la sheegay kadib markii askari ka tirsan ciidamada Somaliland uu dhaawacay mid kamid ah haweenka ka ganacsada Qaadka, waxaana dhaawaca haweenaydaasi uu sababay rabshado xoogan oo dhex maray labada dhinac.
C/kaafi C/risaaq Saleebaan (Dhakool) oo kamid ah shacab weynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood oo goor dhoweyd Waraysi siiyey Radio Garoowe ayaa waxa uu sheegay in ilaa 5 qof oo labo kamid ah ay yihiin shacab ay ku dhaawacmeen dagaalkan dhex maray ciidamada maamulka Somaliland iyo dadka shacab ah halka 3-da kalena ay yihiin qaar kamid ah askarta Somaliland.